Dibumilicsiga Kaydka WDN: MA OGTAHAY IN XAASKAAGA AABBAHEED KABOTOLE YAHAY! - WardheerNews
Dibumilicsiga Kaydka WDN: MA OGTAHAY IN XAASKAAGA AABBAHEED KABOTOLE YAHAY!
Waa yaab, Yaabka yaabkiisa iyo amakaag in Soomaalidu ay dhaqan kadhigato waxyaabo aanan habboonayn, loona baahneyn sida heybsooca dad walalahood ah oo ayaga la midab ah, la dhaqan ah, la af ah, la diin ah iyo weliba la deegaan ah. Dhaqamadani soo jireenka ah waxay sababeen in dad badani oo Soomaali ah laga sooco Soomaali inteeda kale ayadoo loo aaneynayo ficilo hore oo aan la hubin iyo kutidhikuteen jiilba jiil u soo gudbiyay. Dhaqankan damiir xumada iyo liidnimada ku dhisani wuxuu noqday summad ama shaabad dadka lagu kalasooco sida xoolaha oo kale.
Waxaa la yiri, sida aynu ka dhuuxeyno sheekobaralayda Soomaaliyeed ee taxanaha ah ee soo jireenka ah: beri baa labo wiil oo walaalo ah sahmiyey. Markay dhowr maalmood socdeen ayey lakulmeen ayagoo gaajeysan neef geela oo bakhtiyey. Labadiiba si fiican ayey uga dhergeen hilibkii bakhtiga. Saddex cisho kadib ayaa mid iska matajiyey. Waxay muddo maqnaadaanba, waxay kuso noqdeen deegaankoodi halkaaso ay uwarrameen aabbihii dhalay. Odeygii wuxuu lacnaday (habaaray) kii aan iska matajin wuxuuna uduceeyay kii iska matajiyay. Ilaa iyo immika, kii diiday inuu iska matajiyo waxaa loo yaqaan midgaan waana la takooraa. Dabcan, waa qisadii horseedday ‘laan dheere’ iyo ‘laan gaab’ ee aynu faraha kula jirno ilaa iyo immika.
Guntii iyo gebagebadii waxaa iga farriin ah: Soomaaliyey waa inaad ka towbad keentaan dembiyadani xaddhaafka ah ee aad ka gasheen walaalihiinan aan waxba galabsan, waaana inaad la imaataan sifooyiin wanaagsan oo raali geliya cid kastood heybsoocdaan una diyaar garowdaan sidii laysku guursan lahaa loona heli hal ummad kusocota dariiqa toosan ee kuwajahan jannadii naloo ballanqaaday.
Maqaalkani wuxuu ku soo baxay WDN Bishii Janaayo 2014.